यी हुन् कोरोना बिरामीको उपचार गर्न तयार निजी अस्पताल – Health Post Nepal
यी हुन् कोरोना बिरामीको उपचार गर्न तयार निजी अस्पताल
२०७६ चैत २३ गते १३:२५
क्वारेन्टाइनमा रहेका वडाध्यक्षको र्‍यापिड टेस्ट पोजिटिभ
यतिबेला पूरै संसार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट आक्रान्त छ। नेपालमा पनि यो रोगका संक्रमित संख्या नौ पुगिसकेको छ।
हिजो शनिबार धनगढीमा एकैपटक तीनजनामा कोरोना भाइरस ‘पोजेटिभ’ देखिएपछि झन् त्यसलाई ‘रेस्पोन्स’ गर्ने उपचार प्रणाली तयार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले १ सयभन्दा बढी अस्पताल तोकेको छ। तर, महामारी फैलिएको अवस्थामा सरकारी अस्पतालले मात्रै बिरामी धान्न सक्दैनन्। सरकारीभन्दा दुई गुणाबढी जनशक्ति र शैय्या भएका निजी अस्पतालाई समेत सरकारले कुनै पनि बहानामा बिरामी ‘रेफर’ नगर्न चेतावनी दिइसकेको छ।
निजीबाहेक सरकारले राजधानीका नौ ठूला अस्पताललाई कोरोनाको ‘हब अस्पताल’ भनेर तोकेको छ। प्रदेश तथा जिल्लामा पनि कोरोना बिरामीका लागि अस्पताल छुट्ट्याइएको छ।
तर, अस्पतालका पनि आफ्नै गुनासा छन्। एकातर्फ केही अस्पतालले बिरामी उपचार गर्न नमानेको समाचार आइरहेका छन् भने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक ‘व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण’ (पिपिई) सेट नपाएको गुनासो पनि आएका छन्।
तुलनात्मक रूपमा सामान्य अवस्थामा पनि धेरै बिरामी चाप हुनेमध्येका केही अस्पतालले कोरोना महामारी फैलिएको अवस्था जसरी तयारी गरिरहेका छन्।
यद्यपि, सरकारले पनि कोरोना भाइरससँग जुध्न संघीय राजधानीका केही निजी अस्पताललाई समेत सतर्क अवस्थामा रहन आह्वान गरेको छ।
के यतिबेला सबै निजी अस्पताल तयारी अवस्थामा छन्?
नर्भिक अस्पताल : चार भेन्टिलेटर, १५ बेडको आइसोलेसन
थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले ज्वरोको क्लिनिक राखेर चार भेन्टिलेटरसहित १५ बेडको आइसोलेसन तयारी अवस्थामा राखेको छ।
कोरोना आंशकामा १३ बिरामी भर्ना भएको अस्पतालका प्रबन्धक आरपी मैनालीले जानकारी दिए। तयारी हिसाबले नयाँ आइसोलेसन वार्ड नै बनाएर तयारी गरेको नर्भिकले हो।
‘हालसम्मका सबै बिरामीको रिर्पोट नेगेटिभ आएको छ,’ मैनालीले हेल्थपोस्ट नेपालसँग भने, ‘हिजो एकजना बिरामी भर्ना हुनुभएको छ। हामीले परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाएका छौं। अस्पतालले त्यसका लागि जनशक्तिसमेत पर्याप्तमात्रामा व्यवस्था गरेको छ।’
सुमेरु अस्पताल : १० बेडको आइसियु
ललितपुर धापाखेलस्थित सुमेरु अस्पताललाई पनि सरकारले हब तोकेको छ। ज्वरो क्लिनिक राखेर पाँच बेडको आइसोलेसन र १० बेडको आइसियु तयारी अवस्थामा राखिएको अस्पतालका डा. ऋषिकुमार काफ्लेले जानकारी दिए।
हालसम्म सुमेरुमा ज्वरोका बिरामी आए पनि पनि कोरोना आशंका बिरामी भने नआएको उनले बताए।
कोरोना आशंकाका बिरामीलाई हेर्न स्वास्थ्य साम्रगी नभएको डा. काफ्लेले बताए।
‘सरकारले अहिलेसम्म स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था गरेको छैन,‘ उनले भने, ‘बिरामी हेरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई बस्ने उचित व्यवस्थापन छैन।’
‘स्वास्थ्यकर्मी पनि जोखिममा भएका कारण घर जान हुँदैन। अस्पतालमा बस्ने ठाउँ छैन। स्वास्थ्यकर्मी नै असुरिक्षत भएर कसरी काम गर्न सकिन्छ?,’ उनको गुनासो छ।
स्टार अस्पताल : बेग्लै विशेष समूह, आफैं पिपिई उत्पादन
ललितपुर सानेपास्थित स्टार अस्पताल दुई आइसोलेसन बेडसहित आफैं स्वास्थ्य साम्रागी उत्पादनसहित तयारी अवस्थामा बसेको छ।
महामारी फैलिएर सरकारी अस्पतालमा कोरोनाका बिरामी राख्ने ठाउँ नपुगे आफूहरू राख्न र उपचार गर्न तयार रहेको अस्पतालका डा. अनिल पोखरेलले जानकारी दिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सामग्री नभए पनि महामारी लक्ष्य गरी स्थानीय स्रोत–साधन प्रयोग गरी स्वास्थ्य सामग्री तयार पारेको पोखरेलले बताए।
सरकारले शंकाष्पद बिरामी भर्ना गरेर उपचार गरेको तर सुरक्षा साम्रगी नदिएको डा. पोखरेलको भनाइ छ। अस्पतालमा कोरोना आशंकाका केही बिरामी आएको भए पनि सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको उनले जानकारी दिए।
ह्याम्स अस्पताल : १२ आइसियु र ३० जनरल बेड
काठमाडौं मण्डिखाटारमा रहेको ह्याम्स अस्पतालले कोरोना बिरामीलाई लक्ष्य गरी एक महिनादेखि सेवा सुरु गरेको छ।
कोरोना आंशकामा २३ जनाको रिपोर्ट राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाइएको र तीमध्ये २० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि तीनजनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डा. ज्योतेन्द्र शर्माले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कोरोना बिरामी लक्ष्य गरी १२ बेड आइसियु र ३० जनरल बेड छुट्ट्याइएको छ।
‘एक अस्पतालले ज्वरोका बिरामी हेर्न नमानेको घटनालाई सबै निजीलाई एउटै डालोमा हालेर सरकारले आक्षेप लगाएकोमा चित्त दुखेको छ,’ डा. शर्माले भने, ‘राम्रो काम गरेको अस्पतालको पनि मूल्यांकन होस्।’
सरकारी अस्पतालले सुरु नगर्दै आफूहरूले कोरोना संक्रमण उपचार सेवा दिँदै आएको शर्माको भनाइ छ।
ग्राण्डी अस्पताल : पूर्वाधार तयार, पिपिई जोहो तयारी
काठमाडौं धापासीस्थित ग्राण्डी अस्पतालमा हालसम्म शंकाष्पद नै भनेर दुईजना बिरामी भर्ना भएका छन्। उनीहरूले आइसियुमा भर्ना भएर उपचारै लिइसकेको अस्पतालका निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डेले बताए।
अस्पतालले कोरोना बिरामीलाई मध्यनजर गरेर १९ बेड आइसियुमा छुट्ट्याएको छ। ‘कोरोना आशंकामा सातदेखि आठजनाको नुमना परिक्षण भयो,’ पाण्डेले भने, ‘अहिलेसम्म कसैमा पनि पोजेटिभ आएको छैन।’
सरकारी तहबाट सहयोग प्राप्त नभएपछि अस्पतालले नै स्वास्थ्य साम्रगी ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए।
उनका अनुसार २ हजारथान एन९५ मास्क र १ हजार सेट पिपिई ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
‘कोरोना उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई बस्नका लागि छुट्टै आवासको व्यवस्था गरेका छौं,’ पाण्डेले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी पनि सुरिक्षत रहन सकेनन् भने आमनागरिक कसरी सुरक्षित हुन्छन्?’
अल्का अस्पताल : सरकारले सहयोग गरेन
ललितपुर जाउलाखेलस्थित अल्का अस्पतालमा हालसम्म पाँच शंकाष्पद बिरामी भेटिएका छन्। तीमध्ये चारको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको र एकजनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको अस्पतालका अध्यक्ष कुमार थापाले बताए।
‘पाँचवटा आइसोलेसन बेड छुट्ट्याएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले कुनै रूपमा पनि सहयोग गरेको छैन।’
Tags: काेराेना, नीजि अस्पताल